သင် တို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ဒီ ငါးသုံးကောင် အကြောင်း ပြောပြပေးပါ..(ဘဝ အတွက် အလွန် တန်ဖိုးရှိပါတယ်) – Shwe Thuta
သင် တို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ဒီ ငါးသုံးကောင် အကြောင်း ပြောပြပေးပါ..(ဘဝ အတွက် အလွန် တန်ဖိုးရှိပါတယ်)
Shwe Thuta | December 24, 2020 | Knowledge | No Comments
မိမိ တို့ရဲ့ ကလေးေ တွကို ဒီငါး သုံးကောင် အကြောင်း ပြောပြေ ပးပါ..(ဘဝအတွက် အလွန်တန်ဖိုး ရှိပါတယ်)
Chum salmon ငါး အမဟာ ဥ,ဥပြီးတာနဲ့ ဥရဲ့မလှ မ်းမကမ်းမှာ စောင့်ေ နခဲ့တယ်။ ဥကေပါက္လာတဲ့ ငါးကေ လးတွေဟာ အစာမရှာတ တ်သေးတော့ မိခင်ရဲ့အသားကိုပဲ စားရတော့တယ်။
Chum salmon အမဟာ ငါးကလေးကို က်တဲ့ဒဏ်ကို အံကြိတ်ပြီး ခံခဲ့ပါတယ်။ ငါးကလေးေ တွကြီးပြင်းလာချိန်မှာ ငါးအမဟာ အစားခံရလို့ အရိုးပဲကျန်ခဲ့တော့တယ် Chum salmon ငါးအမဟာ လောကမှာ အမြင့်မြတ် ဆုံးဖြစ်တဲ့မိခ င်မေတ္တာကို အသံတိတ် ပေးဆပ်နေ ခဲ့ပါတယ်။ Chum salmon ငါးက မိခင်မေတ္တာပြည့်ဝတဲ့ ငါးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ငါးမျိုးက ဥ,ဥပြီးတာနဲ့ မျက်စိနှစ်လုံး အလင်းကွယ်သွား တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ငါးဟာ မျက်စိမမြင်တော့ အစာမရှာနိုင်လို့ ဆာလောင်တဲ့ ဒဏ်ကိုခံရပါတ ယ်။ ဥကပေါက်လာတဲ့ ငါးပေါက်ေ ထာင်သောင်း များစွာဟာ မိခင်အစာငတ်ေ သသွားမှာကို မကြည့်ရက်လို့ တစ်ကော င်ချင်းစီ မိခင်ရဲ့ပါးစပ်ထဲ ကူးခတ်ဝင်ရောက်ပြီး မိခင်ကိုအာ ရဟာဖြည့်ေ ပးကြပါတယ်။
မိခင်က အသက်ရှ င်ကျန်ရစ်ခဲ့ပေမယ့် ငါးကလေးတွေရဲ့ အသက်ရှ င်နှုန်းက ၁ဝ ပုံပုံ ၁ ပုံပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ မိခင်အတွက် သူတို့ဟာ ငယ်ရွ ယ်တဲ့အသက်ကို စတေးခဲ့ကြပါတယ်။ Northern snakehead ငါးက မိဘကို ရိုသေကို င်းရှိုင်းတဲ့ ငါးဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ် တိုင်း ဥ,ဥတဲ့ရာသီေ ရာက်တိုင်း ဆော်လမွန်ငါး တို့ဟာ ခရီးမိုင်ထောင်ေ ပါင်းများစွာကိုဖြ တ်သန်းပြီး ပင်လယ်ပြင်ကနေ ကုန်းတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ေ မွးရပ်မြေ မြစ်ချောင်းဆီ အရောက်ြ ပန်ကြပါတယ်။ဆော်လ မွန်ငါးတို့ရဲ့အပြန်လ မ်းဟာ ခက်ခဲကြမ်း တမ်းလွန်းလှတာကို CCTV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ တိရစ္ဆာန် ကမ္ဘာအစီ အစဉ်မှာ ရိုက်ကူး တင်ဆက် ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အိမ်အပြန် လမ်းမှာ ရေတံခွန်တွေကို ဆန်တက်ရပါတ ယ်။ရေတံခွန်ဘေးမှာက ဝက်ဝံတွေအုပ်စုလိုက်စောင့်နေကြပါတယ်။ ရေတံခွန်ကိုမဆ န်တက်နိုင် တဲ့ဆော်လမွ န်ငါးတွေဟာ ဝက်ဝံညိုေ တွရဲ့အစာဖြ စ်ရပါတယ်။
ရေတံခွန်ကိုဖြတ်ကျော် နိုင်တဲ့ ငါးတွေက လက်ပန်း ကျနေခဲ့ပေမယ့် လင်းယုန် ငှက်တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးတာကို ရင်ဆိုင်ရပါသေး တယ်။ ကံကောင်း တဲ့ငါးလောက်ပဲ ဖမ်းဆီးသ တ်ဖြတ်တာကို ရှောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သိုလောင် ထားတဲ့ အင်အားနဲ့အ ဆီတွေ ကုန်ခမ်းသွားမှ ဆော်လ မွန်ငါးတွေဟာ ကိုယ့်ေ နရပ်ဆီ ပြန်ရောက်ကြပြီး သူတို့တစ်သက်မှာ အရေးပါဆုံးဖြစ်တဲ့ မိတ်လိုက်၊ ဥ, ဥတဲ့ကိစ္စကို လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်
အဲဒီနောက် သူတို့မွေး ရပ်ဌာနေမှာပဲ အေးအေးချ မ်းချမ်းသေဆုံး သွားကြပါတယ်။နောက်တစ်နှစ် နွေဦးရာသီမှာ ဆော်လမွန်ငါးလော င်းလေးတွေပေါက်ဖွား လာပြါတယ်။ အဲဒီနောက် မြစ်ချောင်းတ စ်လျှောက် စီးမျောလိုက်ပါပြီး သူတို့ရဲ့ရှေ့ မျိုးဆက်အတိုင်း ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝလမ်းကို စတင်ကြပါတယ်။ ဆော်လမွန်ငါးဟာ မွေးရပ်ဇာတိကို မြတ်နိုးတွယ် တာတဲ့ ငါးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောကမှာ အနည်းဆုံး ငါးသုံးေ ကာင်က ကျွန်မတို့ကို သက်ဝင်ခံ စားနေစေခဲ့ပါပြီ။ ပထမငါးတစ်ကောင်က မိဘဖြစ်ပြီး ကျွန်မတို့ကို ဘဝပေးခဲ့သူြ ဖစ်တယ်။သူတို့ကို ခွဲခွာပြီး အဝေးကိုထွက် သွားမယ့်ကျွန် မတို့ကို မျက်စိတစ် ဆုံးနဲ့ သူတို့ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
နောင်တမရှိ၊ မျှော်လင့်ချက်တ စ်စုံတစ် ရာမထားဘဲ သူတို့ပေးဆပ်နိုင်သလောက် ပေးဆပ်နေခဲ့ပါတယ်။
နောက်ငါး တစ်ကောင်က သား သမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းကကျွ တ်တာနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့သွေးသားေ တာ်စပ် သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကစ အိုမင်းတဲ့အထိ အတူတကွနေ ထိုင်အဖော်ပြု သွားမယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ပါ တယ်။နောက် တစ်ကောင်က မွေးရပ်ဇာ တိဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ အဝေးကိုရောက်ရောက်၊ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အိမ်အပြန်လမ်းဆိုတဲ့ လမ်းမပေါ်ဆီ ကျွန်မတို့ေ လျှာက်လှမ်းကြရမှာပါ။
ကျွန်မတို့က အထီးကျန်တဲ့ငါး တစ်အုပ်ပါ။ ဒီကမ္ဘာလော ကထဲ မတော်တဆ ကူးခတ်ရောက် ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဒီလောကထဲခိုလှုံနေထိုင်ရင်း ကျွန်မတို့ဘဝရဲ့ ငါးသုံးကောင်ကို မြတ်နိုးတွယ် တာချစ်ခင်နေခဲ့ကြ ပါတယ်။ကြိုက်နှစ် သက်ရင် အများသိအောင် Share ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။
မိမိ တို႔ရဲ့ ကေလးေ တြကို ဒီငါး သုံးေကာင္ အေၾကာင္း ေျပာျပေ ပးပါ..(ဘဝအတြက္ အလြန္တန္ဖိုး ရွိပါတယ္)
Chum salmon ငါး အမဟာ ဥ,ဥၿပီးတာနဲ႔ ဥရဲ့မလွ မ္းမကမ္းမွာ ေစာင့္ေ နခဲ့တယ္။ ဥေကပါကႅာတဲ့ ငါးကေ လးေတြဟာ အစာမရွာတ တ္ေသးေတာ့ မိခင္ရဲ့အသားကိုပဲ စားရေတာ့တယ္။
Chum salmon အမဟာ ငါးကေလးကို က္တဲ့ဒဏ္ကို အံႀကိတ္ၿပီး ခံခဲ့ပါတယ္။ ငါးကေလးေ တြႀကီးျပင္းလာခ်ိန္မွာ ငါးအမဟာ အစားခံရလို႔ အရိုးပဲက်န္ခဲ့ေတာ့တယ္ Chum salmon ငါးအမဟာ ေလာကမွာ အျမင့္ျမတ္ ဆုံးျဖစ္တဲ့မိခ င္ေမတၱာကို အသံတိတ္ ေပးဆပ္ေန ခဲ့ပါတယ္။ Chum salmon ငါးက မိခင္ေမတၱာျပည့္ဝတဲ့ ငါးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ ငါးမ်ိဳးက ဥ,ဥၿပီးတာနဲ႔ မ်က္စိႏွစ္လုံး အလင္းကြယ္သြား တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ငါးဟာ မ်က္စိမျမင္ေတာ့ အစာမရွာနိုင္လို႔ ဆာေလာင္တဲ့ ဒဏ္ကိုခံရပါတ ယ္။ ဥကေပါက္လာတဲ့ ငါးေပါက္ေ ထာင္ေသာင္း မ်ားစြာဟာ မိခင္အစာငတ္ေ သသြားမွာကို မၾကည့္ရက္လို႔ တစ္ေကာ င္ခ်င္းစီ မိခင္ရဲ့ပါးစပ္ထဲ ကူးခတ္ဝင္ေရာက္ၿပီး မိခင္ကိုအာ ရဟာျဖည့္ေ ပးၾကပါတယ္။
မိခင္က အသက္ရွ င္က်န္ရစ္ခဲ့ေပမယ့္ ငါးကေလးေတြရဲ့ အသက္ရွ င္ႏႈန္းက ၁ဝ ပုံပုံ ၁ ပုံပဲရွိခဲ့ပါတယ္။ မိခင္အတြက္ သူတို႔ဟာ ငယ္ရြ ယ္တဲ့အသက္ကို စေတးခဲ့ၾကပါတယ္။ Northern snakehead ငါးက မိဘကို ရိုေသကို င္းရွိုင္းတဲ့ ငါးျဖစ္ပါတယ္။
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ တိုင္း ဥ,ဥတဲ့ရာသီေ ရာက္တိုင္း ေဆာ္လမြန္ငါး တို႔ဟာ ခရီးမိုင္ေထာင္ေ ပါင္းမ်ားစြာကိုျဖ တ္သန္းၿပီး ပင္လယ္ျပင္ကေန ကုန္းတြင္းပိုင္းမွာရွိတဲ့ သူတို႔ရဲ့ေ မြးရပ္ေၿမ ျမစ္ေခ်ာင္းဆီ အေရာက္ျ ပန္ၾကပါတယ္။ေဆာ္လ မြန္ငါးတို႔ရဲ့အျပန္လ မ္းဟာ ခက္ခဲၾကမ္း တမ္းလြန္းလွတာကို CCTV ႐ုပ္ျမင္သံၾကားရဲ့ တိရစၧာန္ ကမၻာအစီ အစဥ္မွာ ရိုက္ကူး တင္ဆက္ ခဲ့ဖူးပါတယ္။
အိမ္အျပန္ လမ္းမွာ ေရတံခြန္ေတြကို ဆန္တက္ရပါတ ယ္။ေရတံခြန္ေဘးမွာက ဝက္ဝံေတြအုပ္စုလိုက္ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။ ေရတံခြန္ကိုမဆ န္တက္နိုင္ တဲ့ေဆာ္လမြ န္ငါးေတြဟာ ဝက္ဝံညိဳေ တြရဲ့အစာျဖ စ္ရပါတယ္။
ေရတံခြန္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ နိုင္တဲ့ ငါးေတြက လက္ပန္း က်ေနခဲ့ေပမယ့္ လင္းယုန္ ငွက္ေတြရဲ့ ဖမ္းဆီးတာကို ရင္ဆိုင္ရပါေသး တယ္။ ကံေကာင္း တဲ့ငါးေလာက္ပဲ ဖမ္းဆီးသ တ္ျဖတ္တာကို ေရွာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။
သိုေလာင္ ထားတဲ့ အင္အားနဲ႔အ ဆီေတြ ကုန္ခမ္းသြားမွ ေဆာ္လ မြန္ငါးေတြဟာ ကိုယ့္ေ နရပ္ဆီ ျပန္ေရာက္ၾကၿပီး သူတို႔တစ္သက္မွာ အေရးပါဆုံးျဖစ္တဲ့ မိတ္လိုက္၊ ဥ, ဥတဲ့ကိစၥကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္
အဲဒီေနာက္ သူတို႔ေမြး ရပ္ဌာေနမွာပဲ ေအးေအးခ် မ္းခ်မ္းေသဆုံး သြားၾကပါတယ္။ေနာက္တစ္ႏွစ္ ေႏြဦးရာသီမွာ ေဆာ္လမြန္ငါးေလာ င္းေလးေတြေပါက္ဖြား လာျပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ျမစ္ေခ်ာင္းတ စ္ေလၽွာက္ စီးေမ်ာလိုက္ပါၿပီး သူတို႔ရဲ့ေရွ႕ မ်ိဳးဆက္အတိုင္း ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဘဝလမ္းကို စတင္ၾကပါတယ္။ ေဆာ္လမြန္ငါးဟာ ေမြးရပ္ဇာတိကို ျမတ္နိုးတြယ္ တာတဲ့ ငါးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေလာကမွာ အနည္းဆုံး ငါးသုံးေ ကာင္က ကၽြန္မတို႔ကို သက္ဝင္ခံ စားေနေစခဲ့ပါၿပီ။ ပထမငါးတစ္ေကာင္က မိဘျဖစ္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ကို ဘဝေပးခဲ့သူျ ဖစ္တယ္။သူတို႔ကို ခြဲခြာၿပီး အေဝးကိုထြက္ သြားမယ့္ကၽြန္ မတို႔ကို မ်က္စိတစ္ ဆုံးနဲ႔ သူတို႔ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။
ေနာင္တမရွိ၊ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တ စ္စုံတစ္ ရာမထားဘဲ သူတို႔ေပးဆပ္နိုင္သေလာက္ ေပးဆပ္ေနခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ငါး တစ္ေကာင္က သား သမီးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းကကၽြ တ္တာနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ့ေသြးသားေ တာ္စပ္ သူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကစ အိုမင္းတဲ့အထိ အတူတကြေန ထိုင္အေဖာ္ျပဳ သြားမယ္လို႔ ယုံၾကည္ခဲ့ပါ တယ္။ေနာက္ တစ္ေကာင္က ေမြးရပ္ဇာ တိျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အေဝးကိုေရာက္ေရာက္၊ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အိမ္အျပန္လမ္းဆိုတဲ့ လမ္းမေပၚဆီ ကၽြန္မတို႔ေ လၽွာက္လွမ္းၾကရမွာပါ။
ကၽြန္မတို႔က အထီးက်န္တဲ့ငါး တစ္အုပ္ပါ။ ဒီကမၻာေလာ ကထဲ မေတာ္တဆ ကူးခတ္ေရာက္ ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဒီေလာကထဲခိုလႈံေနထိုင္ရင္း ကၽြန္မတို႔ဘဝရဲ့ ငါးသုံးေကာင္ကို ျမတ္နိုးတြယ္ တာခ်စ္ခင္ေနခဲ့ၾက ပါတယ္။ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ရင္ အမ်ားသိေအာင္ Share ေပးဖို႔မေမ့နဲ႔ေနာ္။
အသ က် ကို ဉာဏ်ေ စာင့် ပါတယ် ဆိုတဲ့ ကိုဗစ် နဲ့ ပေးသော် လည်း မရတဲ့ အောက်ဆီဂျင်
ရရှိနိုင်သော ကျန်းမာရေး အကျိုး ကျေးဇူးများ….
ဒီဇင်ဘာလ လေးမှာ မွေးဖွားသူတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အကျင့်စရိုက်(၄)မျိုး
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေ ထုတ်ပြခဲ့တဲ့ ဆေးလိပ်သောက်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ ပျက်ဆီးနေတဲ့ အဆုတ်(ရုပ်သံ)
အိချောပိုရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…..
မျက်ဝန်းရဲ့ အလန်းစား TIK TOK ဗီဒီယိုလေး….
ဘေဘီမောင်ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး…..
မရမ်ဆိုင်နူးရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…..
ရွှေမင်းသမီးလေး ပိုးမမှီသာရဲ့ အလှလေးများ…….